Wararka Maanta: Sabti, July 13, 2019-Madaxweyne Waare oo ka tacsiyeeyay dadkii ku dhintay weerarkii Hoteel Cas-caseey ee magaalada Kismaayo
“Innaa Lillahi wa Innaa Ileyhi Raajicuun. Anigoo ku hadlaya magaca golayaasha Hirshabelle, shacabka Hirshabelle iyo keygaba waxaan tacsi u dirayaa qoysaskii iyo eheladii ay ka shahiideen dadkii argagixisada ku gumaadeen magaalada kismaayo.
Madaxweyne Waare ayaa sheegay in muhiim ay tahay shacab iyo ciidanba loo istaago siddii looga hortagi lahaa kooxaha sida uu hadalka u dhigay cadawga.
“Waxaa weerarkani ay kooxaha naf la caariga ah la beegsanayaan shacabka aan waxba galabsan ay muujinayaan guuldarrooyinka isdaba-joogga ah oo la kulmayaan'' ayuu yiri madaxweyne Waare.
Sidoo kale magaalada Kismaayo ayuu xusay madaxweynuhu in ay ka mid eheyd magaalooyinka ugu nabdoon waxaana maamulka Jubbaland iyo shacbigiisa uu ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan xasiloonida deegaannadooda xili la filayo dhowaan in doorashada Jubbaland ay dhacdo.
Madaxweynaha ayaa ammaan u jeediyay ciidanka maamulka Jubaland sida degdegga ah ee ay uga jawaabeen weerarka islamarkaana u soo afjareen.
Madaxweynaha dowladda Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare oo sii hadlay ayaa Ilaahay uga baryey dadkii ku shahiiday weerarkan inuu Ilaahay naxariistii Jannatul Fardowsa ka waraabiyo, intii ku dhaawacantey uu caafimaad buuxa siiyo, qoysaska iyo eheladii dadkooda ay ku wax-yeeloobeenna uu samir iyo iimaan ka siiyo.